Amagqwetha amaZwe ngamaZwe eNetherlands - Law & More
Njengosomashishini, ngokuqinisekileyo kuya kufuneka ujongane nazo zonke iintlobo zemicimbi yezomthetho. Amagqwetha ethu eshishini anembono yeengcali kwaye anokukucebisa kwaye akuncede kwimicimbi ephathelele kushishino.
> Inkxaso yomthetho eyenziwe ngumsila
> Umcebisi kwezomthetho
Njengosomashishini, ngokuqinisekileyo kuya kufuneka ujongane nazo zonke iintlobo zemicimbi yezomthetho. Amagqwetha ethu eshishini anembono yeengcali kwaye anokukucebisa kwaye akuncede kwimicimbi ephathelele kushishino. Ezi zifundo zilandelayo zinokuqwalaselwa:
Ukusekwa kwequmrhu elisemthethweni;
Ukuncedisa kulawulo lweenkampani;
Ukudibana okunokwenzeka kunye nokufunyanwa;
Uyilo novavanyo lweemvumelwano;
Imicimbi yerhafu ngaphakathi kwinkampani.
Ukongeza kwiinkonzo zomthetho ezihlanganisiweyo, Law & More ikwabonelela zonke iinkonzo onokulindela ukuba zibe kwifemu yomthetho. Siliqabane lakho elichasene naye xa kufanelekile, sinika ingcebiso kwezomthetho kunye nokufaka isimangalo egameni lakho xa kufanelekile.
"Law & More ubandakanyekile
kwaye unako ukuba nobubele
neengxaki zabaxumi bayo ”
Inkxaso yomthetho eyenziwe ngumsila
Ukuzibandakanya kwezamashishini kuhlala kuyinto yomcimbi wexesha. Kubalulekile ke ukubala inkxaso yomthetho ekhawulezileyo. Iingcali kwi- Law & More anike inkxaso esemthethweni yegqwetha elidibeneyo, ngelixa kwangaxeshanye unolwazi olukhethekileyo kunye nolwazi-lwegqwetha. Ungatsalela umnxeba kwi-ofisi yethu ukuba uxhase iqela lakho lamagqwetha asekhaya, sinokwenzela imisebenzi njengommeli osisigxina endlwini okanye ungatsalela umnxeba umqeshwa Law & More yeprojekthi, isithuba esivulekile okanye ukungabikho kwexesha elide kwegqwetha. Oku kwenza ukuba Law & More Ukubonelela ngenkxaso yomthetho ehambelana nomthetho.
Abameli bethu benkampani bakulungele
Ngaba umntu akahlangabezani nezivumelwano zabo? Singathumela izikhumbuzi kwaye sibeke ilitha
Uphando olufanelekileyo lwe-dilligence lunika isiqiniseko. Siyanceda
Ngaba ungathanda ukwenza imithetho eyahlukeneyo yabanini-zabelo ukongeza kumanqaku ombutho wakho? Sibuze ngoncedo lwezomthetho
Asaneli kuphela ukukhangela iimeko ngexesha elifanelekileyo, kodwa sikwabonelela ngazo zonke izivumelwano ezifanelekileyo. Oku kuya kuthintela iingxaki kwixa elizayo kwaye kunciphise ithuba leenkqubo ezide zibe zincinci. Ukuba inkqubo eza kuthi ingafumaneki, ke sinolwazi lwangaphakathi endlwini lokukunceda. Njengosomashishini, unokugxila ngokupheleleyo kurhwebo. Sikunye nawe, sihlalutya imeko kwaye sichonge amaqhinga. Ngaba unomdla kwiinkonzo zegqwetha lenkampani? Emva koko nxibelelana nabameli beshishini apha Law & More.